Maxay salka ku heysaa Hanjabaadda uu Mareykanka u jeediyay Turkiga - BBC News Somali
Maxay salka ku heysaa Hanjabaadda uu Mareykanka u jeediyay Turkiga
Image caption Kurdiyiinta Suuriya ayaa ka mudaharaadayay hanjabaadda Turkiga ee ahayd inuu weerar hor leh kusoo qaadayo
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku gooddiyay "inuu dhulka ku dari doono dhaqaalaha waddanka Turkiga" haddii uu Turkigu weeraro xoogagga Kurdiyiinta ah ee ku sugan gudaha Suuriya, kadib marka la hirgaliyo qorshaha uu Mareykanka ciidamadiisa uga saarayo Suuriya.
Labo qoraal oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Mr Trump ku sheegay in sidoo kale uusan dooneynin in Kurdiyiinta laftoodu ay isku taagaan ama ka careysiiyaan Turkiga.
Ciidamada Mareykanka ayaa ka barbar dagaallamay Maleyshiyaadka Kurdiyiinta, xilli ay Waqooyiga Suuriya isku fara saareen iyaga iyo kooxda isku magacawday khilaafada islaamka ee Daacish.
Hase ahaatee, dowladda Turkiga ayaa kooxda kurdiyiinta ah ee magacooda loo soo gaabiyo YPG u aqoonsan dhaqdhaqaaq argagixiso ah.
Dagaalka dhaqaale ee Turkiga iyo Mareykanka halkuu ku dumbayn doonaa?
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa si caro leh uga hadlay taageerada uu Mareykanka u muujiyay Kurdiyiinta ku sugan Suuriya, wuxuuna wacad ku maray inuu burburin doono kooxdaas.
Hadalka Mr Trump ayaa daba socday cambaareyn hor leh oo loo jeediyay go'aankiisa ku qotoma in ciidamada Mareykanka laga saaro Suuriya.
Mas'uul heer sare ah oo ka tirsan boqortooyada Sacuudiga, oo lagu magacaabo Amiir Turki al-Faisal, ayaa BBC-da u sheegay in ka bixitaanka Ciidamada Mareykanka ay ka dhalan karto saameyn dhanka khaldan ah, isla markaana ay ka faa'iideysan karaan Iiraan, Ruushka iyo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Asad.
Xog hayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa hadda ku sugan magaalo madaxda dalka Sacuudiga ee Riyaad, waxaana booqashadiisa ay qeyb ka tahay safar uu ku marayo guud ahaan dalalka bariga dhexe, si uu dib ugu xaqiijiyo xulafada dowladda Mareykanka ee gobolkaas.
Muxuu yiri Mr Trump?
Madaxweynaha ayaa difaacay go'aankiisa ku saabsan saaritaanka ciidamada, isagoo sheegay in xilli kasta dagaallameyaasha Daacish ay weerarro kala kulmi doonaan saldhigyada aan la cayimin "ee ku yaalla meelaha u dhow".
Image caption Xoogagga uu Turkiga taageero ee ku sugan Suuriya ayey ka go'an tahay iney weeraraan Kurdiyiinta jooga dhinaca Waqooyi
Ma uusan faahfaahin sida ay waxyeellada u gaari doonto dhaqaalaha Turkiga, haddii uu weeraro kooxda YPG. Mr Trump ayaa sidoo kale xusay in la abuuri doono "khadka nabdoon ee 20-ka mile ah", kaasoo wariyaha BBC-da ee lagu magacaabo Barbara Plett Usher ay sarbeebtay inuu qeyb ka yahay xal uu Mr Pompeo isku dayayo inuu wada xaajoog ku galo.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhanka kale sheegay in Ruushka, Iiraan iyo dowladda Suuriya ay yihiin kuwa ay danta ugu weyn ugu jirtay dhaqdhaqaaqyada Mareykanka ee gudaha Suuriya laakiin hadda la gaaray xilligii ay ciidamada Mareykanka dib ugu soo noqon lahaayeen waddankooda.
"Argagixisadu ma noqon karaan kuwo xulafo kuu ah", ayuu yiri.
Madaxweyne Trump ayaa bishii lasoo dhaafay ka yaabiyay waddamada isbahaysiga la ah, isagoo cambaareyn gudaha ahna la kulmay ka dib markii uu amar ku bixiyay in ciidanka Mareykanka si deg deg ah looga soo saaro dhul lagu qiyaasay 30% ka mid ah waddanka Suuriya oo ay gacanta ku hayaan xoogagga mucaaradka Suuriya ee ay hor kacayaan ururka Kurdiyiinta ah ee YPG.
Muxuu yiri Mike Pompeo?
Dabayaaqadii isbuuca, Mr Pompeo wuxuu sheegay inuu Telefoon kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu isla markaana uu "rajo ka qabo" in Turkiga lagala heshiiyo sidii loo ilaalin lahaa dagaallameyaasha Kurdiyiinta.
Balse wax faahfaahin ah ma uusan bixin.
Image caption Mike Pompeo wuxuu safar siyaasadeed oo xasaasi ah ku marayaa Bariga Dhexe
Mar uu ka hadlayay magaalada Abu Dhabi, ayuu Mr Pompeo sheegay in mareykanku uu aqoonsan yahay xuquuqda ay dadka Turkiga iyo Mr Erdogan u leeyihiin iney dalkooda ka difaacdaan kooxaha argagixisada ah".
"Waxaan sidoo kale ognahay in kuwa xilligaas dheer naga soo barbar dagaallamayay ay mudan yihiin in la ilaaliyo iyagana", ayuu ku sii daray hadalkiisa.
Warbaahinta Mareykanka ayaa soo tabisay in la filayo in Mr Pompeo uu magaalada Riyaad kula kulmo saraakiil ka socota Iiraan, kuwaasoo uu kala hadli doono dagaallada Yemen iyo Suuriya.
Waxaa kale oo lagu soo warramay inuu raadinayo macluumaad ku saabsan baaritaannada lagu sameynayo dilkii loo geystay wariye Jamaal Khaashuqji.
Mr Khashoggi, oo ahaa Suxufi dhaliila boqortooyada Sacuudi Carabiya, ayaa saddex bilood ka hor lagu dilay Qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul.
Turkiga oo jawaab kulul ka bixiyay hanjabaadda Trump
Dowladda Turkiga ayaa si caro leh uga jawaabtay hanjabaadda uga timid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo ku gooddiyay inuu burbur xoog leh u geysan doono dhaqaalaha Turkiga, haddii uu weeraro xoogagga Kurdiyiinta ah, ka dib markii ciidamada Mareykanka laga saaro Suuriya.
Af hayeenka madaxweynaha Turkiga, oo lagu magacaabo Ibrahim Kalin, ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ku sheegay in waddankiisu uu filayay in Mareykanka uu qaddariyo istiraatiijiyaddiisa dhinaca xulafada ee uu la leeyahay Turkiga.
Wuxuu sheegay in kooxo argagixiso ah aysan u noqon karin xulafo iyo isbahaysi, taasoo la xiriirta mowqifka ay xukuumadda Ankara ka taagan tahay kooxaha Kurdiyiinta ah.
Waa imisa tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya?
Qiyaastii 2,000 oo ka tirsan milatariga Mareykanka ayaa lagu soo warramay iney joogaan waqooyiga dalka Suuriya.
Ciidamada dhulka ayaa markii ugu horreysay halkaas la geeyay sannadkii 2015-kii, xilligaasoo madaxweynihii xilka hayay ee Mareykanka Barack Obama uu tiro kooban oo ciidamo khaas ah u diray Suuriya, si ay tababar iyo la talin u siiyaan dagaallameyaaasha kooxda YPG.
Tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyay waxaa sii badanayay tirada ciidamada Mareykanka ee la geynayay Suuriya.